Maninona i Bogota no lasa tanànan'ny fiainana Night International amin'ny Novambra?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Maninona i Bogota no lasa tanànan'ny fiainana Night International amin'ny Novambra?
Ny tanànan'i Bogotá any Kolombia dia handray ny kaonferansa faha-5International Nightlife International ary ny loka Golden Moon faha-4 amin'ny 14 Novambra miaraka amin'ny ExpoBar Fair any Kolombia.
Ny tanànan'i Bogotá any Kolombia no hampiantrano ny 5thKongresy momba ny Nightlife Iraisam-pirenena ary ny 4th Golden Moon Awards amin'ny 14 Novambrath miaraka amin'ny ExpoBar Fair any Kolombia. Ny herinandro lasa teo tany Ibiza, ny filohan'ny Fikambanan'ny Nightlife International (INA), José Luis Benítezand filohan'ny Fikambanan'ny Nightlife any Colombia (ASOBARES), dia nanaiky hiara-miasa i Camilo Ospina. Araka ny efa fantatrao, ny INA dia manao kongresy iraisam-pirenena isan-taona sy lanonana loka ary nanapa-kevitra ny hankalaza ny fanontana amin'ity taona ity miaraka amin'ireo 5th fanontana ny ExpoBar Fair. ExpoBar no hetsika fialamboly manan-danja indrindra any Kolombia miaraka amin'ny mpanatrika 3.000 mahery ao anatin'izany ny solontenan'ny indostria, ny mpiasa, ny manampahefana ary ny mpanohana.
Tamin'ny fivoriana nifanaovana teo amin'ny roa tonta dia nifanarahana ihany koa ny fidiran'ny ASOBARES Colombia (Colombia Nightlife Association) ho ao amin'ny International Nightlife Association izay nanamafy ny fikambanana iraisam-pirenena. Amin'izao fotoana izao, ny INA dia manana solontena manerantany amin'ny firenena 8 (Etazonia, Espana, Frantsa, Italia, Belzika, Emira Arabo Mitambatra, Meksika ary Kolombia) ary ireo fampidirina ao Japon sy India, miampy trano 13,000 mahery. Amin'ny anaran'ny International Nightlife Association, izahay dia mandray ny ASOBARES Colombia ho mpikambana mavitrika vaovao ary misaotra anao noho ny fahavononanao sy ny fandraisam-bahiny namelanao ny INA hiara-hankalaza ny hetsika iraisam-pirenena amin'ny foara fanaony isan-taona.
The 5th Kongresy momba ny fiainana amin'ny alina hafa hiatrika olana lehibe toy ny fiarovana, fandotoan-tabataba, fizahan-tany mozika, kalitao sy hatsarana, miaraka amin'ireo mpandahateny fanta-daza iraisam-pirenena, izay vahinin'ny Expobar, mpampiantrano ny hetsika rehetra. Ny lohahevitry ny Kongresy Iraisampirenena dia ny "Triple Excellence in Nightlife", fanavahana kalitao telo izay natolotry ny INA amin'ireo toerana sy klioba ireo izay mahafeno andiana fitakiana momba ny fiarovana, ny akustika ary ny kalitaon'ny serivisy taorian'ny fanaraha-maso akaiky. . Marihina fa i Bogotá, renivohitry ny hetsika hataontsika manaraka, dia namoaka ny "Sello Seguro", mari-pankasitrahana ampahibemaso navoakan'ny Tanàna ho an'ireo toerana mahafeno ny fepetra takiana ary hiadiana hevitra ao amin'ny Kaongresy iraisam-pirenena.
Mandritra ny harivan'ny Novambra 14th , ny International Nightlife Associationww dia hamoaka ny lisitr'ireo "Club 100 tsara indrindra eran-tany 2018" arahan'ny fanakatonana hetsika ofisialy ny Expobar karakarain'ny ASOBARES sy ny tompon'andraikitra fizahan-tany ao Bogotá. Ny renivohitra Kolombiana no ho ivon'ny indostrian'ny fiainana amin'ny alàlan'ny famoahana amin'ny fomba ofisialy ny lisitra malaza amin'ireo klioban'ny alina manandanja indrindra eto an-tany, ao anatin'izany ny "World Best Club 2018", toerana notanan'i Ushuaïa Ibiza amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny androany, rehefa miditra ao amin'ity lisitra malaza ity ny kandidà dia misy klioba 195 avy amin'ny firenena 33 samy hafa. Misokatra hatramin'ny 30 Aogositra izao ny fanolorana anarana. Amin'izao fotoana izao, Etazonia dia manana klioba 34 voatendry, Espana 26, Italia 15, UK 14 ary Brezila miaraka amin'ny mpifaninana 7 avy. Ireto ireo firenena izay mampiaraka ny mpifaninana indrindra amin'ny faritany misy azy avy mba hahazo ny loka Golden Moon ho an'ny "The Best Club World". Ireo toerana 195 ireo dia manondro ny daty avy amin'ny firenena miovaova toy ny Arabo, Singapore, Suède, Czech Republic, Russia, Malta, Japan, Argentina, ary Colombia vao haingana.
Ny fomba fifidianana ny lisitra dia voaforona 70% ny vato avy amin'ny mpitsara matihanina (misy vondrona matihanina mifandraika amin'ny tontolon'ny fiainana amin'ny alina ary mpitantana marika zava-pisotro, mpitantana avy amin'ny tontolon'ny fizahan-tany sy ny mpikambana ao amin'ny Fikambanana) raha 30% kosa dia malaza amin'ny alàlan'ny tambajotra sosialy izay hanomboka hifidy amin'ny 14 septambrath, latsa-bato izay hisokatra hatrany hatramin'ny 4 Novambra, izany hoe hatramin'ny 10 andro talohan'ilay hetsika tany Bogotá, Kolombia.
Ny lisitra amin'ity lisitra malaza ity dia misy ny fampidirana ireo programa mozika ao an-toerana mandritra ny taona, lafiny maro amin'ny isan'ny mpanjifa, ny fepetra fiarovana, ny tolotra VIP natolotra, ny famandrihana an-tserasera, ny fomba fanao tsara amin'ny asa, ny fanekena, ny kalitao akustika ary ny fanoloran-tena ho an'ny United firenena tanjona toy ny fanajana ny tontolo iainana, ny miralenta ary ny toe-piainana.
Araka ny filazan'ny Joaquim Boadas de Quintana, sekretera jeneralin'ny International Nightlife Association, “… Amin'ny alàlan'ity hetsika ity dia te-hampiroborobo sy mandrisika ny toeram-pialam-boly manerana an'izao tontolo izao izahay mba hifaninana ary hahazo laharana amin'ity lisitra malaza ity ary mety hitarika izany mihitsy aza, hampiasa vola amin'ny lafiny tsara, fotodrafitrasa, serivisy ary fiarovana. fepetra izay mahatonga azy ireo hifaninana, manintona ary azo antoka kokoa, izay hiteraka tombony ho an'ny mpampiasa ary hanatsara ny lazan'ilay sehatra, izay tanjontsika farany. ".
Nampihetsi-po? Inona avy ireo tanàna 20 tsara indrindra hipetrahana any Etazonia?
Vaksiny? Tsidiho indray i Alemana raha rahampitso
28 minitra lasa izay